4 Nzira dzekuti Ugare Uchimhanyisa Zvirongwa SeMutongi Mauri Windows 10
Mazhinji emapuratifomu echinyakare edesktop kunze uko haadi kodzero dzemutungamiri kumhanya. Nekudaro, zvirongwa zvakagadzirirwa zvemberi mashandiro zvinoda manejimendi manejimendi kumhanya. Yakakurumbira Macrium Fungisisa Chirongwa hachifanirwe kuitwa pasina kodzero yemutungamiriri, semuenzaniso.
Paunotanga chirongwa chinoda kuti maneja ave nemvumo yekumhanyisa, iwe unowana iyo Yekushandisa Akaundi Yekodhi skirini kwaunoda kunya bhatani re Hongu kutanga chirongwa icho mutariri.
Kana iwe uchida kusvetuka ichi UAC skrini uye uchida kugara uchimhanya zvirongwa semubati, iwe uchave unofara kuziva kuti zvinogoneka kwazvo.
Muchirongwa ichi, tichaona maitiro ekuita zvirongwa semukuru wezvemitemo mukati Windows 10.
Tip: Wakanga uchiziva here kuti iwe unogona kukurumidza kuvhura chero chirongwa semutongi nekunyora zita rechirongwa uye panguva imwechete uchidzvanya Ctrl + Shift + Enter?
INOKOSHA: Usape mvumo maneja kuzvirongwa zvisina kuvimbika.
Method 1 ye4
Gara uchimhanyisa zvirongwa semukuru mukati Windows 10
Step 1: Nyora zita rechirongwa raunoda kugara uchimhanya semutongi kuti uone zita rechirongwa mumhedzisiro yekutsvaga. Kungofa pazita rechirongwa wobva wadzvanya Vhura nzvimbo yefaira kuti uone icon yepfupiso yechirongwa muFaira Explorer (Start menyu folda kana sub-folda).
Step 2: Kungofa pane icon yepfupiso yechirongwa uye tinya Properties.
Step 3: pasi yokudimbudzira tab, kanda pane enderera bhatani. Izvi zvichazarura dialog itsva ine zita rekuti Advanced Properties.
Step 4: Pano, sarudza iyo Mhanya semutungamiri cheki. Dzvanya OK bhatani. Dzvanya Shandisa.
Step 5: Kana iwe ukawana inotevera dialog ye "Access Denied", tinya iyo Ramba bhatani.
Ndizvo zvose! Kubva ikozvino zvichienda mberi, chirongwa ichi chichaitwa otomatiki sem maneja.
Method 2 ye4
Ita kuti zvirongwa zviitwe semutariri nekukanganisa mukati Windows 10
Step 1: Tsvaga iyo purogiramu mu Kutanga / taskbar yekutsvaga. Kungofa pazita rechirongwa wobva wadzvanya Vhura nzvimbo yefaira kuvhura iyo purogiramu pfupi mu File Explorer.
Step 2: Kungofa pane purogiramu pfupi uye wobva wadzvanya Properties kuita.
Step 3: Tendeukira kune kugarisana tabo. Muchikamu cheSystem, sarudza Mhanya chirongwa ichi semu maneja wekutarisa bhokisi. Dzvanya OK bhatani. Dzvanya Shandisa.
Mumwe anogona kudzima zvachose iyo Mushandisi Akaunti Dzivhiti kuti ubvise iyo Akaunti Yekushandisa Kudzora, asi kudzikisira UAC haina zano sezvo ichibatsira kudzivirira kusatenderwa kushandurwa pakombuta yako.
Method 3 ye4
Gadzira chirongwa mapfupi icons pane desktop kuti ushande semutongi
Kana iwe uine mapfupi emapurogiramu pane desktop, unogona kugadzirisa iyo nzira pfupi yekufambisa kuti iite nguva dzose nematare emutungamiriri. Heano maitiro ekuita izvozvo.
Step 1: Kungofa pane ipfupi icon yechirongwa pane desktop uye wobva wadzvanya iyo Properties kuita.
Step 2: Tendeukira kune kugarisana tab uye sarudza Mhanya chirongwa ichi semukuru chisarudzo. Dzvanya OK uye ipapo chengeta Shandisa.
Method 4 ye4
Gara uchimhanyisa zvirongwa semutariri kuburikidza neRegistry
Step 1: Vhura Registry Editor nekunyora Regedit.exe muKutanga / taskbar / Mhanya bhokisi wobva wadzvinyirira iro Enter Enter.
Step 2: MuRegistry Editor, fambai kune chinhu chinotevera:
Step 3: Tsvaga iyo Layers kiyi. Kana zvisipo, kurudyi pa AppCompatFlags key, click New, uye ipapo tora Key. Zita zita racho Layers. Skip nhanho iyi kana maRyers kiyi iripo.
Step 4: Sarudza kiyi yeZvikamu pane pane kuruboshwe. Kurudyi-kurudyi, kurudyi panzvimbo isina chinhu, tinya New uye ipapo chengeta String Kukosha.
Step 5: Iye zvino, mune iyo File Explorer, teedzera iyo yakazara nzira kune ino enda faira yechirongwa chaunoda kugara uchimhanya semutongi.
Kuti uwane gwara rechirongwa, tsvaga icho muKutanga / basa rekutsvaga, tora-kurudyi pamusoro pacho, tinya Vhura faira nzvimbo, kurudyi-kurudyi pane chirongwa chechiratidzo, tinya Properties, uye wobva wateedzera nzira yeiyo chirongwa Target .
Step 6: MuRegistry Edhira, kurudyi pane String Value yakakosha, tinya Danazve, uye wobva waisa nzira yeyafaji faira rechirongwa.
Step 7: Pakupedzisira, piya-peta pairi uye shandura kukosha kwayo data ku ~ RUNASADMIN uye ipapo chengeta OK bhatani. Izvi zvichaita kuti chirongwa chigare chichiita semutongi.
Maitiro Ekugadzira Bhatani Shortcuts Ehurongwa mukati Windows 10
Dzai Kushandura Kushandura Kwemapurisa KuFirita Folder In Windows 10
Zvinorevei "Kumhanya seManeja" mukati Windows 10?
Makumi mana neshanu Zvakanakisisa Zvirongwa Zvinobhadharisa Iyo Yepamusoro Commission
Kumhanya yako yekutanga batch script pa Windows 10
Google 3D zvinhu: Maitiro ekuona ma dinosaurs muAR chaimo mukicheni mako
Tsvaga Outlook Email neSender, Zuva, Keyword, Ukuru uye Zvimwe